Dadka aan diinta heysanin dalka Kenya oo dalbaday in loo sameeyo maalin fasax ah – Madal Furan
Hoy > Warka > Dadka aan diinta heysanin dalka Kenya oo dalbaday in loo sameeyo maalin fasax ah
Dadka aan diinta heysanin dalka Kenya oo dalbaday in loo sameeyo maalin fasax ah
Editor August 21, 2018 Warka 0
Nayroobi (Madal Furan) – Nin u dooda dadka diin-laaweyaasha ah ee dalka Kenya ayaa ka codsaday wasiir Fred Matiang’i in uu iclaamiyo in bisha Febraayo 17-keeda ay noqoto maalin fasax ah oo ay leeyihiin diin-laaweyaasha.
Iyadoo la raacayo baaqii maalintii Talaadada ee lagu dhawaaqay in ay bisha Agoosto tahay maalin fasax qaran ah oo lagu xusayo Ciidul Adxaa, ayaa waxaa ururka dadka aan heysanin diinta ‘Atheists in Kenya'(AIK) uu sheegay in iyaguna ay doonayaan in sidaasi oo kale loo sameeyo isla markaasina loo tixgeliyo waxa ay aaminsan yihiin.
“Kenyaanka aan waxba aaminsaneyn waxa ay u baahan yihiin iyaguna in maalin fasax ah la siiyo,” ku xigeenka madaxa AIK Ms Siongok ayaa warkani u sheegtay rugaha warbaahinta maalinimadii Axadii.
Horey ayaa waxaa u dhacday in ay kooxaha aan diimaha aaminsaneyn ay eedeeymo kulul yu jeediyeen dowladda dalka, iyaga oo sheegay in dowladdu dhinac u janjeerto isla markaasina ay sameysay hal dhinac oo arrimaha diinta ka eegtay.
“Waxaanu isticmaali doonaa fursad aynu ku muujineyno sida aynu u wajaheyno banaanbaxyo badan oo aynu kowntiyo badan ku qaban doonno si aynu uga faa’iideysano in aynu dadka tusino in aynu nahay dad aan waxba aaminsaneyn (Diin-Laaweyaal).
Diin laawenimada ayaanu aaminsannahay in ay kor u qaadi karto xornimada dhanka diinta iyadoo ah qeyb bani’aadamnimada ka mid ah inaga oo eegayna qodobka 27-aad ee dastuurka dalka” sidaasi waxaa yiri Ms Siongok.”
Qodobka 27(4) ee dastuurka dalka Kenya ayaa sheegaya: “Jamhuuriyadda aysan kala qoqobin si toos ah iyo si dadban loona kala eegin dhalashadiisa, meesha uu ka soo jeedo, dhanka guurka, iyo caafimaadkiisa, jinsiyadiisa, bulshadiisa, kalarkiisa, da’diisa cuuryaanimada, waxa uu aaminsan yahay, dhaqankiisa, dharka uu xiran yahay, iyo Luuqadiisa dhalashada.”
Ururka AIK ayaa loo diiwaangeliyay in uu u dhisan yahay qaab bulsho bishii Febraayo 17-keedii sanadkii , 2016-kiii (Societies Act, Cap 108) hase yeeshee waxaa ka hor yimid Prof Muigai kaasi oo hakiyey kadib mucaaradid kaga timid culimada dalka waxaana la dhowrayaa ilaa iyo inta ay sharciyadda kooxdaasu ka soo hagaagto.
Si kastaba ha ahaatee, maxkamadda sare ee dalka ayaa waxa ay burisay dib diiwaangelintii kooxda.
Weerar 17 qof ku dhimatay iskuul ku yaal gobolka Florida ee Mareykanka